ခံစားမှု့သံစဉ်: အမှတ်တရ December ....( Tag ပိုစ့်)
Posted by blackroze at Saturday, December 24, 2011
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် on 24 December 2011 at 04:34 said...
ပျော်ရွှင်သောခရစ္စမတ်နှင့် နှစ်သစ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ပါစေ
San Htun on 24 December 2011 at 05:49 said...
Merry X-mas & Happy New Year to pigpig !
မဒမ်ကိုး on 24 December 2011 at 08:13 said...
အင်းး တို့လဲအများကြီးဘဲကွဲ့ နာကျင်စရာတွေ ပျော်ရွှင်စရာတွေ ကြည်နူးစရာတွေ ကြေကွဲစရာတွေ ကြောက်လန့်စရာတွေအားလုံး ဒီဇင်ဘာထဲ မှာဘဲ ကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးလို့ ဒီဇင်ဘာဆိုတာဘ၀အတွက် မမေ့နိုင်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးပါပဲ .
(တဂ်ထားတဲ့ရိုစ့်ရေ ရေးပေးပါ့မယ်နော်း)ခုတော့လိုက်မန့်နေတုန်းး)
အတဂ်ခံရတဲ့ အရိပ်လေးလဲ အရိပ်ဘ၀ကလွတ်မြောက်ပြီး စာပြန်ရေးနိုင်ပါစေ
Merry X'Mass and Happy Newyear နဲ့အတူ
ကိုတူး on 24 December 2011 at 10:57 said...
ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ဝမ်းနည်းမှု ရောယှက်နေတယ် .. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘ၀ နေ့ရက်တိုင်းတွေမှာ အမြဲတမ်းပဲ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း နေ့ရက်တိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ လို့ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်...
--*-- Merry X'mass & Happy New Year --*--
Candy on 24 December 2011 at 11:27 said...
New year ည ကိုဖြတ်သန်းချင်ပုံလေးက ရိုမန်းတစ်လိုက်တာ... ရေးပေးလို့ ကျေးဇူးပါ မမ.. :D
မမနာမည်လေးလည်း စိတ်ထဲက ခန့်မှန်းသွားတယ်နော် :D :D
Cameron on 24 December 2011 at 14:33 said...
ပျော်ရွှင်သော ခရစ္စမတ်နဲ့ နှစ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ ချစ်ညီမလေးပစ်ပစ်..။
စံပယ်ချို on 24 December 2011 at 15:05 said...
၁၂ လရာသီမှာ ချစ်ရသူနဲ့ တူတူတွဲပြီးခိုင်မြဲပါစေလို့နော်
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! on 24 December 2011 at 16:19 said...
Merry Christmas & Happy New Year....ပါမမရေ..
အမှတ်တရတွေ ပြည့်နေတဲ့ ဒီဇင်ဘာမှာ .... ပျော်ရွင်ခြင်း ပေါင်းကူးတံခါးလေးလည်း ဖွင့်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း...
ဘိုဖြူ on 24 December 2011 at 17:53 said...
ဘုန်းဘုန်းတောက် on 25 December 2011 at 00:02 said...
ဒီဇင်ဘာနဲ့ ပစ်ပစ်ရဲ့အဖြစ်နဲ့ တိုက်ဆိုင်လိုက်တာကွယ်...နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ...
ညီရဲ on 25 December 2011 at 02:17 said...
ဆောင်းရာသီမှာ ပွင့်တဲ့ အမြင့်ဆုံးပန်းဆိုတော့ သဇင်များလား သူငယ်ချင်းရယ်....
ပျော်ရွှင်ဖွယ် ခရစ်စမတ်လေး ဖြစ်ပါစေ သူငယ်ချင်းရေ...
သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) on 25 December 2011 at 03:37 said...
ဒီဇင်ဘာက သူ့အတွက် သက်သက် ဖြစ်ပေါ်လာတာ ကျနေတာဘဲ။ တိုက်လဲ တိုက်ဆိုင်နိုင်လွန်းပါ့။ ဂလိုဆို အာဝါဟ၀ိဝါဟပွဲ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ဆင်နွှဲရင်လဲ ဒီဇင်ဘာမှာဘဲ ဖြစ်ဖို့များတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ ဒီဇင်ဘာပေါင်းများစွာ ဖြစ်နိုင်ပါစေဗျားးးး။
ညိမ်းနိုင် on 25 December 2011 at 13:10 said...
ရွာကာလေမစဲတဲ့ လွမ်းရသောဒီဇင်ဘာပါလားကွယ်...။ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဇင်ဘာ
ထဲမှာ အလွမ်းတွေ၊ခံစားချက်တွေကို ထားခဲ့တော့နော်...။နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ
မှာ အလွမ်းမဲ့ဒီဇင်ဘာများကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေဗျာ...၊နှစ်လိုဖွယ်ခရစ်စမတ်နှင့်
...အလင်းစက်များ on 25 December 2011 at 13:37 said...
မငိုပါနဲ့ပစ်ပစ်ရယ်။ စီအိုင်အေမှာ အသည်းနုလို့ မရဘူးနော်။ :P
mstint on 25 December 2011 at 23:42 said...
ရိုးမြေကျ on 28 December 2012 at 14:16 said...
Tom & Jerry ကို အရမ်းကြိုက်တယ် ထင်တယ်။ ဒီပို့စ်လေးအားပေးသွားပါတယ်။ နောက်လာမယ့် ဒီဇင်ဘာတွေမှာ ချိုမြိန်မှုတွေပဲရပါစေလို့။
ရိုးမြေကျ on 28 December 2012 at 14:18 said...